Archive du 20170422
Antsojay tsy an-kitsitsy MBS tsy sokafana,TIKO akatona ?
Manomboka mihamafy ny tsindry avy amin�ny mpanohana an�i Marc Ravalomanana amin�ny tokony hanokafana ny haino aman-jery MBS (Malagasy Broadcasting System),
Leader Fanilo Tany tsy misy fanjakana i Madagasikara
Mahery vaika ny fanambaran�ny antoko Leader Fanilo manoloana ny raharahampirenena. Nivantana ny tenin�ity antoko naorin�i Herizo Razafimahaleo ity, fa toy ny tany tsy misy fanjakana intsony eo Madagasikara, ary mihavery ny maha izy azy ny Malagasy. Tsy voaaro ny ainy sy ny fananany na an-tan�n-dehibe na ambanivohitra, potehina ny soatoavina.
Sendikan�ny mpitsara Tsy maintsy hajaina ny fanjakana tan-dal�na
Azo atao hoe teboka iray nitarika fiovam-pijery goavana teto amin�ny firenena ny raharaha Claudine Razaimamonjy, ka nahatonga ny tsirairay sy ny isan-tsehatr�asa handini-tena lalina sy tsy hanaiky intsony ny gabaoraraka teo aloha.Aoka izay ny tsindritsindry isan-tsokajiny fa avelao hiasa malalaka araka ny lal�na ny mpitsara, hoy ny sendikan�ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) nandritra ny fivoriambe notanterahan�izy ireo omaly tetsy Anosy.
Taratasin�ny Jean Niverina tamin�ny naloa !
Miarahaba anao aho ry Jean amin�izao nahazoanao mpiara-miasa � vaovao � izao a ! Tena lasa ho aho ny saiko e ! Manonofy ratsy ve aho sa tena mamo tampina fa ohatry ny tsy vaovao amiko ireo mpiara-miasa naverinao amin�ny toerany ireo a !
Fe-potoana nomena an�i Claudine A&C Hifarana ny alatsinainy izao
Ny alatsinainy 10 aprily lasa teo no niala teto Madagasikara i Claudine Razaimamonjy, ka fitarafana sy fitsaboana antsoina hoe �Angiographie c�r�brale�, izay nambara ho tsy vita eto Madagasikara no antony nandefasana azy tany Maorisy.
Randriamahavalisoa Girard Hahasambotra an�i Lylison ve ?
Tsy dia any amin�ny fampandrosoana na tetikasa goavana no anton�ny nanoloan�ny fanjakana ankehitriny ireo mpikamban�ny governemanta fa mba hanamafisana orina ny fahefana sy ny sezan�ny HVM.
Tian-kano tsy tian-kano !
Tany amin�ny tsy mivonto no nanaintaina, hoy fitenenana nanoloana ny fanovana minisitra vitsivitsy nataon�ny fanjakana HVM.
SEKOLY AMBARATONGA AMBONY Latsaky ny 25 % no afaka manohy izany eny ambanivohitra
Latsaky ny 25 %-n�ireo ankizy afa-panadinana Bakal�rea any ambanivohitra no fantatra fa mba afaka manohy ny fianarany eny anivon�ny sekoly ambaratonga ambony raha mahatratra 70% mahery eto an-drenivohitra.